Katharine McPhee anoratidza kushungurudzika nemurume David Foster mune zvinyorwa zvitsva - Nhau
Katharine McPhee anoratidza kushungurudzika nemurume David Foster mune zvinyorwa zvitsva
David Foster anogona kunge ari basa rakaoma. Izvi zvinoenderana nemuimbi, mugadziri uye mukadzi wechishanu wemunyori, muimbi-mutambi Katharine McPhee.
Muzvinyorwa zvitsva 'David Foster: Off the Record,' Katharine, ane makore makumi matatu nemasere, anotsanangura mashandiro anoita murume wegore rimwe, makumi manomwe, uye asingadi kubata nezvinhu pamoyo, Peji Rechitanhatu inoshuma. Pane dzimwe nguva apo iwe unonzwa senge, 'Mwari, ane tsitsi here zvachose?' 'Aimbove' American Idol 'mumhanyi uye nyeredzi ya Broadway's' Waitress 'anodaro muNetflix doc. 'Akanaka kwazvo pakuvanza zvaanonzwa. Anongoda kuti zvinhu zvese zvive zvakanaka nguva dzose uye kana zvisina kudaro, aenda. '
Iye akamupokana nezvazvo, anotsanangura mufirimu: 'Ndakati kwaari,' Ndinoda kuti iwe uedze kuedza kunzwisisa manzwiro andinoita, 'uye aive akafanana,' Zvakanaka, pamwe unofanira kubva ipapo, 'uye Ini ndaive senge, 'Kwete, kwete, ndinoziva izvi ndizvo zvaunoita saka usatambe mutambo uyu neni.' '
David haarambe kukanganisa kwake, achibvuma kuti anogona kuve, Peji rechitanhatu rinoshuma, 'mumhanyi' muhukama. 'Chero ani anondidaidza kuti - buri rezvinhu zvandakaita, ndinofunga vanogona kunge vari pachokwadi,' anobvuma. 'Ndinofunga ndanga ndiri - gomba zvakanyanya. Ini handisi amai vane moyo isina moyo - kana. '
Mune zvinyorwa, zvinorova basa rekutepfenyura muna Chikunguru 1, David anokurukura zvekare mukadzi wechina aimbova mukadzi Yolanda Hadid, waakaparadzanisa naye muna 2015 paakanga achirwa nechirwere cheLyme, kunyangwe achiti haazomboburitsa pachena kuti sei akamuramba. 'Ndingasiya sei mukadzi anorwara?' anodaro mu doc, maererano nepeji rechitanhatu. 'Chokwadi chenyaya yacho ndicho chisiri icho chikonzero chandasiya. Izvi zvaive zvechimwe chikonzero chandisingazombofumure icho chisina chekuita nekurwara kwake. '
David akaburitsa pachena kuti aisafarira gigi raYolanda pa'Vakadzi Vechokwadi veBeverly Hills. ' 'Mudzimai wangu panguva iyoyo aida kuita chiratidziro,' anodaro mu doc. 'Ini ndaisada kuve mukomana wekuramba kwete.' Paanozikanwa nevateveri veBravo show, anobvuma kuti anozviwana achida kutaura, 'Hei, ndine gumi nematanhatu - Grammys, hafu bhiriyoni zvinyorwa [zvakatengeswa]. F— iyo inoratidzira! '
Kate Hudson anobuda muwigi mushure mekuveura musoro wake
Casey Affleck uye Zhizha Phoenix vanopedzisa kurambana
chinokonzeresa chinokonzera kufa kwezai
ndiani zita remurume waJudy zita
flip kana flop nyeredzi muhoro
caitlyn jenner anoda kudzokera pakuva murume